I-China YENDALO IMATSHINI YENDALO kunye noMthengisi | EMontary
1.Isicelo: Ikhitshi lendlu, irestyu, ihotele, Ivenkile yeevenkile, iziko lezoRhwebo, iProjekthi, ubuNjineli, njl.
2.Factory:Sinelayini yokuqhubela phambili yemveliso kunye nabenzi abanamava kakhulu; Singafezekisa ubungakanani bakho obukhethekileyo okanye iimfuno zombala kwiimakhishithi kunye neemfuno ezizodwa zoyilo kwiimveliso ezigqityiweyo ngomatshini wokukrola we-CNC.
Izinto: ILitye leNdalo
2. Ifektri: Sinelayini yemveliso ephezulu kakhulu kunye nabenzi abanamava kakhulu; Singafezekisa ubungakanani bakho obukhethekileyo okanye iimfuno zombala kwiimakhishithi kunye neemfuno ezizodwa zoyilo kwiimveliso ezigqityiweyo ngomatshini wokukrola we-CNC.
Iimveliso I-countertop yekhitshi yemarble
Ukusetyenziswa / ukusetyenziswa ikhitshi
Iinkcukacha zobukhulu Ifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo beemveliso ezahlukeneyo
(1) Ubungakanani beekhasethi: 96 "x26", 108 "x26", 96 "x36", okanye ubungakanani obenziwe ngokwezifiso, njl.
(2) Ukutyeba: 20 MM okanye 30mm
(3) iinkcukacha ngentando nazo ziyafumaneka;
Umphezulu Gqiba Ikhazimlisiwe
Iphakheji (1) iibhokisi zeplanga ezomeleleyo zolwandle.
(2) Iyafumaneka ngokweemfuno zokupakisha ngentando;
Yonke le phakheji ingentla iya kufakwa isitampu somyalelo wokuthumela ngaphandle;
Izinto eziphathekayo Uhlobo lweMarble
Ukutyeba 18 mm
Inkqubo yobuGcisa Senza iincopho zamatye ngemabhile yendalo, sinqunqwe ngomatshini emva koko sakhazimla ngabasebenzi bethu abanamava nabanobuchule.
1.Are inkampani urhwebo okanye mveliso? Singumzi mveliso, onokubonelela ngomgangatho ophezulu ngexabiso eliphantsi.
2. Zeziphi iingxaki ezinokubakho ngenkqubo yofakelo? Ilitye lendalo linomgangatho oethe-ethe, nceda ukhumbuze umsebenzi ukuba aphathe ngobunono kwinkqubo yokufaka, sicebisa ukuba u-odole isikwere ezimbalwa ukuze ulungiselele usuku lwemvula. Kwakhona, zonke iimveliso zethu ziqinisekisiwe, ukuthengisa kwethu kuya kuzilungisa izizathu kwaye ngokuqinisekileyo uya kuhlawulwa ngokufanelekileyo.
3. Ngaba ndingafumana iisampulu zasimahla? Ewe, isampuli yasimahla iyafumaneka. Kodwa kufuneka uhlawule iindleko zothutho.
4.Can ndenze iimveliso kuyilo lwethu? Ewe, senza i-OEM kunye ne-OBM.
Egqithileyo ILITSHI ELIMELWEYO
Okulandelayo: i-nano yeglasi ekhompyutheni yekhitshi
IMarble yendalo eMnyama